श्रीमद्भागवत महापुराण नेपालीमा (प्रथम अध्याय) « Pariwartan Khabar
संसारको सृष्टि आदि तीन सर्गका आधार, आफ्नै स्थितिमा यथावत् रहेका, तीन कालमा नबाँधिने, स्वयं प्रकाशमान, ज्ञानका स्वरुप, आदिकवि ब्रह्माका हृदयमा वेद प्रकट गराइदिने, ज्ञानीहरु पनि अल्मलिन सक्ने, तेजका कारण जल र स्थलमा भ्रान्ति हुने जस्ता, छलभन्दा पर रहेका, भ्रमलाई परास्त गर्ने, उनै सत्यका स्वरुपलाई ध्यान गरौँ । धर्मको विमर्श गरिएको, संसारका ठूलो मोहबाट मुक्त गर्ने, लोकमा वास्तविक ज्ञान दिने, कल्याणकारी, तीन ताप नाश गर्ने, महामुनि व्यासदेवले रचेको श्रीमद्भागवतले तत्काल सुन्नेहरुका हृदयको अवरोध हटाई ईश्वर प्रकट गराइदिन्छ । हे रसिक एवं भावुकहरु वेदरुप कल्पवृक्षबाट शुकदेवरुप सुगाका मुखको संयोगले खसेको, अमृतरसले परिपूर्ण फल, रसको भण्डार भागवतलाई पृथ्वीमा बारम्बार पान गर ।
सूतसँग ऋषिहरुको जिज्ञासा
अति सुन्दर नैमिषारण्यक्षेत्र । स्वर्गलोक प्राप्त गर्ने रहरमा शौनकादि ऋषिहरु हजार वर्षदेखि बसेर यज्ञ गरिरहेका । बिहानको अग्निमा आहुति गर्ने काम पनि सकियो । सम्मानसाथ सूतलाई सोधे-
हे पवित्र, सौम्य सूत ! तिमीले इतिहास–पुराणका कथा, धर्मशास्त्र र अरु पनि धेरै कुरा पढेका छौ । वेदका श्रेष्ठ ज्ञाता भगवान् व्यास र अरु विद्वान् मुनिहरु ब्रह्मको सगुण र निर्गुण स्वरुप जान्दछन् । तिमीले तिनीहरुको कृपा पाएका छौ र ती सबैको तत्व जान्दछौ । त्यो कुरो गोप्य नै भए पनि भन । तिमी हाम्रा गुरु हौ र हामी तिम्रा स्नेही शिष्य हौँ । तिमीले ठम्याएका ती कुरा मानिसलाई हितकारी हुन्छन्, त्यसैले हामीलाई सिकाउने कृपा गर ।
कलियुगमा मानिसको आयु छोटो छ । मान्छे ढिला, मन्दबुद्धि र मन्दभाग्यका छन् । काम लाग्ने कुराहरु धेरै छन्, त्यसैले मनमा खुसी सारभूत कुरो छानेर भन । हितैषि सज्जनका पालक भगवान् वासुदेव के गर्न देवकीबाट जन्मिए भन्ने तिमी जान्दछौ । सबै प्राणीका रक्षक भगवान्का हितकारी अवतारका विषयमा जान्न इच्छा गर्ने हामीलाई सबै बताऊ । दुःखी संसारमा आपद् पर्दा भगवान्को नाम जप्दा डर पनि डराउँछ र मुक्ति पाइन्छ । मुनिहरु उनकै आश्रयमा रहेर लामो समय गङ्गाजल सेवन गर्दा नपाएको पवित्रता तत्काल पाउँछन् । त्यस्ता पुण्यश्लोक, पूज्यकर्म भगवान्को कलिको दोष मेटाउने र शुद्धि गराउने यश कसले नसुन्ला ?
भगवान्का उदार कर्मको विद्वान्हरु चर्चा गर्छन् । हामी श्रद्धालुलाई पनि हरिका कला, अवतारको पवित्र कथा र मायाले गरेका लीला बताऊ । सुन्न खोज्ने, रसज्ञ हामी उत्तमश्लोकका लीलाका स्वादले र पराक्रमका कथाले अघाउँदैनौँ । बलरामसँग रहेर केशवले कस्तो मानिसले गर्न नसक्ने पराक्रम मानिसकै छलमा गरे ? कलि लागेको थाहा पाएपछि हामी यस वैष्णव क्षेत्रमा लामो यज्ञ गर्दै हरिकथा सुन्न बसेका हौँ । मानिसको ज्यान लिने अपार समुद्र जस्तो कलिमा तिमीलाई विधाताले कर्णधारका रुपमा भेट गराए । योगेश्वर, ब्रह्मरुप, कृष्ण आफ्नो धाममा गएपछि धर्म कसका शरणमा गए, त्यो पनि भन ।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ।।१।।